TAARIIKHDA DHULBALAARSIGA XABASHIDA IYO XAALADDA DAGAAL EE SOOMAALIYA KA TAAGAN. | Voice Of Somalia
Xiisadda dagaalka ee maanta Soomaaliya ka taagan waa mid asal ku leh dhul-balaarsiga Xabashida iyo aaminsanaanta xukunka iyo gacan ku haynta dhulalka Soomaalida. Doodan waxa aynu ku eegaynaa milicsiga taariikhdeed iyo damaca Xabashida ee dhul-balaarsiga.
Waddanka Itoobiya loo yaqaan waxa ku nool in ka badan 100 qabiil oo kala duwan, hase ahaatee awoodda iyo maamulka waxa weligood gacanta ku hayey qabiilka Amhaarada ee Boqor Haile Selasse ka dhashay iyo qabiilka Tigrinya ee Meles Zenawi ka dhashay. Sida ay labadaas qabiil aaminsan yihiin, waxa ay sheegtaan in ay asalkoodii ka soo jeedaan dad loo yaqaanay Sabaen (sheban) oo ku abtirsada Boqortooyadii Nabi Saleebaan (Solomon Kingdom) kana yimi Koonfurta Jasiiradda Carabta; geeska-afrikana ay soo degeen sanadkii 1000 BC (dhalashiid Nebi Ciise ka hor).
Sida ay taariikhda ay sheegtaan werinayso, waxa ay si toos ah ugu abtirsadaan Boqor Menelik I oo ahaa wiilkii ay dhaleen Boqorkii iyo Boqoraddii (Queen Sheba iyo King Solomon). Inkasta oo ay ka soo degeen Xeebaha Musawac (Eriteria) muddona ku sugnaayeen, waxa ay Boqortooyadii Xabashidu bilowday dhulbalaadhsi iyo in ay qabiiladii ay dhulka ugu yimaadeen u xoog sheegtaan. Waxa la weriyey in Boqortooyadaas ay xoogaysatay sanadadii 1500 BC (dhalashadii Nebi Ciise ka hor) oo ay la magac baxday Boqortooyadii Axum (Axum Empire).
Ka dib markii cadaadiskii ay dadka ku haysay sii batay, Boqortooyadii Axum awooddeedii way sii liicday mudadii 900 AD (dhalashadii Nebi Ciise ka dib). Mudadaas awoodda Boqortooyadii Xabashidu sii yaraanaysay waxa kor u kacay awooddii dadka Muslimiinta ah ee dhulkaas ku noolaa. Waxana ay abuureen maamul xoog leh oo saldhiggiisu yahay magaalada Harar.
Markii la gaadhey sanadkii 1300 waxa aad isu soo abaabulay Boqortooyadii Xabashida si ay mar kale xukunkii u soo ceshadaan. Boqorkii Xabashida ee waqtigaas Negus Yeshaaq ayaa waxa uu la xidhiidhay l424kii labadii boqortooyo (Spain iyo Portugal) ee waqtigaas Yurub ugu xoogga weynaa si ay awooddii dib muslimka uga soo ceshadaan. Taageeradaas labada boqortooyo u fidiyeen Xabashida, waxa ay u suurto gelisay in laga adkaado Xukuumaddii Islaamka ee waqtigaas jirtey. Xukuumadda Islaamka oo loo yaqaanay Saldanadii Islaamka ee Adal, waxa ay ka koobnayd qabiilo Muslimiin ah oo kala duwan, oo ay ka mid ahaayeen Soomaalidu.
Ka dib markii ummadda muslimiinta ah muddo madaxa lagaga taagnaa ayaa waxa halgan dagaal bilaabay mudadii u dhexaysay 1504 – 1543 Imam Axmed Ibraahim Al-Qasaali (Axmed Gurey). Dagaalkaas (Jihaad) uu la galay Boqortooyadii Xabashida (Abasiiniya) waxa uu ku soo celiyey sharaftii muslimiintii dhulkaas deganayd ee Soomalidu ka mid ahayd.
Imaam Axmed Gurey waxa uu soo baxay waqti muslimiinta geeska Afrika dhibaato weyn ka haysatay boqortooyadii Xabashida iyo wadamadii reer Yurub ee ay ka midka ahaayeen Boqortooyadii Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska Isbaanishka (Spaine) iyo Bortaqiiska ee doonayey in Afrika ay xoog ku xukumaan. Dagaalka Ahmed Gurey Xabashida la galay waxa uu ku mideeyey muslimiintii deganayd laga bilaabo Harar ilaa Suudaan. Inkasta oo ay qabiilo badani sheegtaan, hadana Soomaalidu waxa ay aaminsan yihiin in Imaam Axmed Gurey ahaa nin Soomaali ah. Dadyawgii sheeganayey in uu iyaga ka dhashay waxaa ka mid ahaa, Danaakilada, Oromada, Canfarta, Herariyiinta iyo Carabtii dhulkaas deganayd. Imaam Axmed Gurey waxaa la sheegay in uu ku dhashay dhulka u dhexaysa Saylac iyo Harar. Waxaana askari Boortaqiis ahi ku dilay Suudaan sanadkii 1543kii.
Dagaalka Boqortooyada Xabashidu qabiilada dhulkaas deggan kula jirtay, waxa uu markastaba ahaa mid xukun iyo saldana raadis salka ku haya, si hadaba damacaasi ugu suurto galo waxa ay Boqortooyadu mar walba isticmaali jirtey diinta Kiristaanka oo ay calool jileec iyo taageero kagaga raadinaysay waddamada reer galbeedka ee Kiristaanka ah. Boqor kasta oo Xabashida maamulana waxa hal hays u ahaa “Itoobiya waa Jasiirad Kiristaan ah oo ku dhex-taalla Bedweyn Islaam ah.” Taas oo ay ula jeedeen in Kiristaanka dhulka deggan laga badan yahay oo ay ku dhex nool yihiin badweyn Islaam ah. Doodaasi waxa ay noqotay tii ugu faa’iidada badnayd Xabashida ee u suurto gelisay in ay reer galbeedka (Kiristaanka ah) ka helaan taageero aan weligeed dhammaan.
Mudadii 1880s waxa ay ahayd markii Xabashidu hubkii ugu badnaa ay hesho oo ay dhul balaadhsigii ugu weynaa ku dhaqaaqdo. Dhaqaalaha dhulka Soomaalidu degto ayaa aad u xumaaday (laga Shabeelaha Sare ilaa laga gaadhayo xeebaha Banaadir), taas oo ay sabab u ahayd hubka badan ee Xabashidu heshay iyo duulaamadii ay ku qaadday dhulalkii Soomaalida; ka dibna xoolihii iyo waxa ay hanti haysteen ka dhacdo, ceelashii ay ka cabi jireenna ka qabsato. Dhacaas ka sokoow, duulanadaas Xabashidu waxa ay dhaawac weyn u geysteen dhaqdhaqaaqii dadka iyo baayacmushtarkii dadka Soomaalida ah ka dhexeeyey. Waxa kale oo weeraradaas Xabashidu abuureen nabad gelyo darro iyo dadkii oo safaradii ka baqay.
Boqor Menelik hubka culus ee uu haystay waxaa ugu deeqay wadamadii ay ka midka ahaayeen: Ingiriiska, Ruushka, Boortaqiiska, Faransiiska iyo Isbaanishka. Ujeedada ugu weyn ee wadamadaasi u taageerayeen waxa ugu weynaa xagga diinta. Waayo waxa ay rabeen in Islaamka awoodda laga wareejiyo. Isla mudadaas ayaa wefdi Ingiriis ah oo uu hoggaaminayey Admiral Hewitt, loo diray Abasiiniya, si ay uga wada hadlaan sidii ciidamadii Masaarida ee Harar deganaaa ay si nabad gelyo ah halkaas uga bixi lahaayeen, wuxuuna la kulmay Boqorkii Xabashida.
Markii ciidamada Xabashidu qabsadeen Harar waxa ay dileen Cabdalla Maxamed, oo ahaa Amiirkii Harar ee xukumayey Muslimiinta. Boqor Menelik markii uu qabsaday Harar wuxuu xukunkii u dhiibay ina-adeerkii Ras Makonnen. Menelik, isla markiiba wuxuu warqad u diray xafiiskii Ingiriiska ee Cadan, wuxuuna u sheegay “in Cabdalla Maxamed, uu ahaa nin dhaxlay maamulkii Imaam Axmed Gurey, ee Harar qabsaday qarnigii lix iyo tobnaad, sidaas darteedna in jabkiisu (Cabdalla) uu yahay badbaaadinta iyo soo celinta sharafta Masiixiyadda (Kiristaanimada).
Qaybsigii Afrika iyo Sedkii Xabashida
Intii ka horeeysay qarnigii 18aad, ee aan reer Yurub bilaabin in ay danayso dhulyowga Afrika iyo caalamka adduunyada 3aad, Soomaalidu waxa ay dhaqan iyo dhaqaaleba aad ugu xidhnayd caalamka Islaamka, gaar ahaan waxaa aad ugu xidhnaa dalalkaas meelaha xeebaha ah ee sida Bulla Xaar, Berbera, xeebaha Banaadir iyo Bendar Qaasim (Boosaaso). Xiligaas dawlad Soomaaliya la yidhaahdaa ma jirin, laakiin waxaa jirey xidhiidh iyo xeer qabiil intii isku deegaan ahba ka dhexeeyey, wixii dhibaato timaadana waxaa lagu xallin jirey xeer Soomaali. Hase ahaatee, dhibaatadii ugu weynayd waxa ay timi wakhtigii Afrika reer Yurub kala qaybsadeen. Shirkii ugu horeeyey ee reer Yurub Afrika ku qaybsanayeen wuxuu ka dhacay magaalada Baarliin (Berlin) ee dalka Jarmalka (Germany) 1884.
Markii Afrika la kala qaatay dhulkii Soomaalidu deganeyd waxaa kala qaybsaday saddex waddan oo reer Yurub ah, Ingiriiska, Talyaaniga iyo Faransiiska. Ingiriisku wuxuu qayb u helay dhulka Somaliland, Talyaaniguna Soomaaliya (Italian Somaliland), iyo Faransiiska oo qayb u helay Jabuuti. Waxaa kale oo Ingiriiska gacantiisa ku jiray dhulalka Hawd iyo ‘Reserve Area’ ee maanta loo yaqaan Ogaadeeniya oo uu markii dambe Xabashida ku wareejiyey; waxaa kale oo xukunkiisa ku hoos jiray dhulka N.F.D. (Northeastern Frontier District) oo hadda loo yaqaan Waqooyiga Bari ee Kenya. Maadaama waqtigaas Ingiriisku xukumay Kenya wuxuu ku ladhay Kenya. Halkaas waxa ka muuqata oo taariikhdu ina tusinaysaa in Xabashidu ahad dawladda keliya ee Afrikaanka ah ee dhul Afrikaan gumeystayaashii Yurub la qaybsata.
Horaantii sannadkii 1897 waxa ay Xabashidu heshiisyo kala duwan la gashay Faransiiska iyo Ingiriisk, heshiisyadaas oo qeexayey xuduudyada dhulalka Soomaalida ee ay kala haysteen
Ka dib markii sannadkii 1891 Seyid Maxamed Cabdulle Xasan dhulka Soomaalida ku soo laabtay isaga oo dhulal badan oo Jasiiradda Carabta ka tirsan oo maray. Waxa isbedelay wejigii Xabashida qabiilada Soomaalidu kula dagaalami jireen, waxana Daraawiishtii Seyid Maxamed abaabulay bilaabeen duulaano nidaamsan. Wejigan cusub ee dagaalku waxa uu aad u cabsi geliyey dhammaan gumeystayaashii dhulalka Soomaalida boobay ee ay Xabashidu ka midka ahayd. Waxana gumeystayaashii bilaabeen in heshiisyo iyo xulufaysi cusub bilaabaan si ay Daraawiishta meel uga soo wada jeestaan.
Dagaalkii ugu horeeyey oo Xabashida iyo Ingiriisku isku bahaysteen waxa uu ka dhacay magaalada Jigjiga 5 Maarj. 1900. Waxaana la weriyey in ay Daraashiista u suurtowday in ay xoolo badan oo qabiilka Ogaadeen laga dhacay ku soo dhiciyaan. Dhammaadkii 1902dii shir Ingiriiska iyo Talyaanigu Rooma ku yeesheen waxa ay isku raaceen in duulaan kama dambays ah Daraawiishta lagu qaado si loo tirtiro. Saldhigyada hoggaaminta ciidamadana waxaa loo doortay Hobyo iyo Berbera. Heshiiskana waxaa ku jirey in Talyaanigu qabsado Hobyo oo xukunkiisu gaadho dhulka Mudug, hase ahaatee ciidamada Ingiriisku ka qayb qaadan doonaan dabar goynta Daraawiishta. Waxaa kale oo la sheegay in heshiiskaasu u fududaynaayey Talyaaniga in uu xoog ku muquuniyo Suldaan Cali Yuusuf Keenadiid oo Hobyo xukumi jirey.
Af-gembigii Xayle Selasse iyo Xukuumaddii Mingistu Xayle Mariam
Sannadkii 1974 Kornayl Mingistu Haile Mariam ayaa waxa uu inqilaabay xukuumaddii Boqor Haile Selassie. Mingistu waxa uu markiiba bilaabay cadaadis iyo cabudhin ka daran kii Haile Selassie wuxuuna cadaadis weyn ku bilaabay. Sannadkii 1975kii waxaa muuqatay in mucaaradkii Mingistu Haile Mariam ka soo horjeeday aad u batay, ciidamadiisiina ay ku adkaatay in ay cabudhiyaan dhammaan qawmiyadihii ka soo horjeeday. Xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre ee waqtigaas oo u arkaayey in Mingistu laftiisu olole siyaasadeed ku wado xukunka (Maxxamed Siyaad Barre); waxa uu oggolaaday in Xamar laga furo xafiiskii W.S.L.F. (Western Somalia Liberation Front), oo ay markaas xubno ka ahaayeen Oromo Muslim ah, Aruusi iyo Ogaadeen; waxaana Xamar yimid S/Guuto Wako Guto, oo garab iyo gaashaanba dawladda Soomaaliya ka doonayey. Waxa sidoo kale Mingistu oggolaaday in dadkii xukuumadda Maxamed Siyaad Barre ka soo horjeeday xafiisyo ka furtaan Addis Ababa. Waxayna labada dhinac bilaabeen dacaayad joogto ah oo saxaafadda la isu adeegsanayo.
W.S.L.F waxa ay bilaabeen in ay duulaano ku qaadaan magaalooyinkii Soomaalida ee Xabashidu gumeysato. W.S.L.F waxa ay badhtamihii 1977 sheegatay in ay xoraysay dhowr magaalo oo ay Godey ka mid ahayd. Mingistu Haile Mariam waxa uu xukumaddii Maxamed Siyaad Barre ku eedeeyey in ay dagaalkaas ka dambayso, wuxuuna Minguste adduun weynaha ka codsaday kaalmo lagaga hortago dagaalkaas xad gudubka ah. Inkasta oo uu muddo maamulkii Maxamed Siyaad Barre dafirayey in ciidamadiisu dagaalka ku jiraan; Juulaay 1977 ayaa dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya si rasmi ah u bilowday, wuxuuna dhammaaday 1978, ka dib markii Ruushka, Kuuba iyo dhawr waddan oo reer galbeed ahi dagaalkii kala qayb galeen Xabashida.
Markii Soomaaliya lagu jibiyey dagaalkii 1977, Xabashidu waxa ay ku sii dhiiratay in ay dagaalo isdaba joog ah gudaha Soomaaliya ku qaaddo, iyada oo aad u adeegsan jirtay diyaaradaha dagaalka. Diyaaradahaas oo badanaaba duqayn jirey meelaha shacabku ku badan yahay, waxa ay khasaarihii ugu weynaa geysteen bishii Juulaay 1984, ka dib markii ay duqeeyeen magaalada Boorama, hubkii ugu cuslaa oo Iskuul ku dhacay, waxa uu dilay 37 caruur (arday) ah. Dayiraadaha Xabashidu wax ay isla mudadaas duqeeyeen magaalooyin kale oo ay ka mid ahaayeen Hargeysa, Galdogob iyo Caabud-Waaq.
Markii jabhaddii SSDF (Somali Salvation Democratic Front) la aasaasay ka dib, waxa bilowday weeraro Xabashida iyo Jabhad wada socdaa ay ku soo qaadi jireen gobolada Mudug iyo Galgaduud. Hase ahaatee, Xabashidu mar walba way dafiri jirtey in ay weeraradaas ku lug leedahay waxaana sheegan jirey hoggaanka jabhadda oo uu hoggaamiye u ahaa Kornayl Cabdullahi Yusuf Axmed oo hadda ah madaxweynaha Dawladda ku Meelgaadhka ee Soomaaliya. Xabashidu waxa ay kaloo u oggolaatay waddankeeda jabhaddii SNM (Somali National Movement) ee lagu dhawaaqay sannadkii 1981kii.
Mudadii ciidamada Xabashida iyo jabhadihii Soomaalida ee ay taageerayeen Soomaaliya duulaanka ku hayeen, waxaa Mingistu laftiisa ku socday dagaal xoog leh oo ay ku wadeen jabahadihii ka soo horjeeday, gaar ahaan kuwii Eriteriya (ELF) oo ahayd jabhad aad u xoog badan oo taageero weyn ka heli jiray maamulkii Maxamed Siyaad Barre.
Jabkii Mingistu Xayle Mariam iyo Qabsashadii Xukunka ee Jabhadda Tigrayga
Dagaaladaas mudada dheer socday ee jabhaduhu ku wadeen Mingistu Haile Mariam iyo Maxamed Siyaad Barre waxa ay markii dambe sababeen in labadoodiiba la rido oo awooddii xukunka laga qaado sanadkii 1991. Markii ciidamadii Mingistu Haile Mariam ay in la jebiyo ku dhowaayeen oo ay jabhadihii ka soo horjeeday qarka u saaraayeen magaala madaxda Addis Ababa waxa isaga iyo jabhadihii dhex galay maamulkii Maraykanka ee waqtigaas, Mingistu-na waxa uu markii dambe aqbalay in uu waddanka ka baxo si uu dadkiisa uga badbaadiyo dagaal sokeeyo oo lagu hoobto. Mingistu waxaa nabad gelyo siyaasadeed siiyey dawladda Zimbabwi xukunkiina waxa la wareegay Meles Zenawi oo Ra’iisal Wasaare noqday. Nasiib darro, Maxamed Siyaad Barre ma uusan aqbalin talooyinkii loo soo jeediyey ee ahaa in in xukunka iska wareejiyo dagaalkii jabhaduhu kula jireenna waxa uu sababay in magaalada Xamar xoog lagaga saaro bilowgii 1991kii.
Markii Mingistu waddanka ka baxay, Eriteriya inteeda badan waxa ay gacanta ugu jirtay jabhaddii ELF. Waxa kale oo iyaguna dhulkoodii qabsaday jabhadihii Oromada (Oromadu waa dadka Itoobiya ugu badan) kuwii Cafarta iyo kuwii Soomaalida. Hase ahaatee maadaama ciidamadii Tigray-du ay Addis Ababa iyo magaalooyin waaweyn oo muhiim ah qabsadeen, waxa ay sidoo kale la wareegii awooddii dawladda intii badnayd. Inkasta oo jabhadii Tigray-du ay awoodii xukunka intiisii badnayd la wareegeen, haddana waxa khasab ku ahayd in ay la heshiiyaan qabiilada intooda kale, si aanay dagaal kale u gelin. Ka dibna waxa ay jabhadihii iyo dhaqan madaxeedkii gobolada (Soomalidu ka mid ahayd) isugu yimaadeen halkaas oo ay ku dhiseen dawlad loo dhan yahay gobol kastana siinaysa ismaamul xor ah (Autonomous administration) waxa ayna ra’iisal wasaare u doorteen Meles Zenawi.
Markii Meles Zenawi oo qaxooti ku ahaan jirey Soomaaliya uu xukunkii Itoobiya qabsaday, dad badan oo Soomaali ahi waxa ay iska dhaadhiciyeen in colaaddii Soomaalida iyo Xabashida u dhexaysay halkaas ku soo af-jarantay. Nasiib darro, dadkii fikraddaas qabay waa dad aan si fiican u dhuuxin taariikhda cadaawadda ah ee mudada dheer ka dhexaysay Xabashida iyo shucuubta Soomaalida ah ee weligood dhibaatadu kaga imanaysay dhinaca Xabashida iyo dawladihii xulufada la ahaa.
Burburkii maamulkii Maxamed Siyaad Barre iyo dagaaladii sokeeye ee ka dambeeyey, waxa ay Xabashida u noqotay fursad qaali ah oo suurto gelin garta in aan dawlad dambe oo Soomaaliya la yidhaahdo dib loo maqal. In kasta oo laga yaabo in Meles Zenawi abaal u hayo wanaaggii Soomaalidu u gashay xilligii xaaladu ku adkayd, haddana waxa ka xoog batay aaminsanaanta lagu tacliimiyey in Itoobiya “Libaaxa Afrika” tahay, shacbiga Soomaaliduna ay ka mid yihiin shacbi ka mid dadweynaha reer “Abasiiniya (Itoobiya). Fikraddaas oo ay qabaan qabiilada laga aqlibadda badan yahay (Amxaarada iyo Tigray-da) hase ahaatee weligood xoog ku maamulayey shacbiga badan ee dhulkaas ku nool, waa “aaminsanaan” aad khatar u ah asal-na u ah khilaafka guud ee Xabashida iyo Soomaalida u dhexeeya.
Si haddaba aanay u suurto gelin in ay dhalato dawlad xoog leh oo Soomaaliyeed maamulka Meles Zenawi waxa uu aad ugu dedaalay sidii uu qabqalayaashii dagaalka ee iska soo horjeeday u sii kala qaybin lahaa una abuuri lahaa xaalad dagaal iyo degganaansho la’aan ku raagta dhulka Soomaalida.
Mashruuca la Dagaalanka “Argagixisada” iyo Doorka ay kaga Jirto Xabashidu
Intaas Meles Zenawi kuma ekaane waxa uu bilaabay dagaalo iyo duulaano is-daba joog ah oo uu ku kiciyo dhulkii Soomaalida ee horeba dhibaatadu uga taagnayd. Duulanadaas oo bilowday sannadkii 1996. Bishii Agoos 1999 ciidamado Xabashi ahaa oo magalada Buulo Xaawo xoog ku qabsaday ayaa waxa ay toogteen laba qof oo shacbi ah. Ciidamada Xabashida oo magaalooyin badan oo gobolka Gedo ka tirsan dhawr jeer oo kala duwan ku duulay, waxaa la sheegay in ay dad badan laayeen, maal fara badana ka dheceen. Waxaa kale oo la sheegay in ciidamada Xabashidu dad dhulkaas u dhashay oo wadaado u badnaa qafaashteen oo Itoobiya u afduubeen. Xabashida oo mar walba mar marsiiyo ka dhiganaysay in ay ciidamada Al-Itixaad (wadaado) ay la dagaalamayeen, waxa ay dadkii dhulkaas deganaa sheegeen in Xabashidu taageero buuxda ka haysatay dad gobolka u dhashay oo biidhi qaatayaal ahaa. Waxaa kale oo la weriyey in Xabashidu taageero buuxda ka haysatay dawladda Maraykanka oo iyaduna wadaadada dagaal kula jirtay.
Arrinta la dagaalanka wadaadu waxa ay aad u sii xoogaysatay, ka dib markii niman Carab ah oo is-biimeeynayey ay bishii Sebtembar 11keedii, 2001 ay inta ay diyaarado af-duubeen wax-yeello weyn ugu geysteen Maraykanka. Markii arrintaas nasiib darrada ahi Maraykanka ka dhacday, waxa maamulka madaxweyne George W. Bush go’aansaday in uu dagaal ku qaado “wadaadada xag-jira” meeshay doonaanba ha joogaane.
Si haddaba loola dagaalamo “wadaadada xag-jira” dawladda Mayakanku waxa ay ku bixisay lacag badan waxa ayna maamulka Meles Zenawi u xilsaartay in uu wakiil (Maraykanka) uga noqdo Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya la dagaalanka “argagixisada/wadaada xag-jira.” La dagaalanka “wadaadada xag-jira” waxa ay noqotay mashruuc aad u weyn oo cid waliba hungurayso. Maamulka Meles Zenawi ka sokoow, waxaa iyaguna mashruucaas aad uga qayb galay Jamhuuriyadda Jabuuti, maamulka Somaliland, maamul goboleedka Puntland iyo qaar ka mid ah qab-qablayaashii dagaalka ee Muqdishu oo la sheegay in ay iyagu dad nool dhoofin jireen.
Waxa la weriyey in maamulka Meles Zenawi Jan. 2002 ciidamo gaadhaya ilaa 300 uu u diray Garoowe, caasimadda maamul goboleedka puntland. Inkasta oo xukuumadda Xabashiduu muddo dafiraysay ciidamada Soomaaliya joogay, waxa ugu dambayntii bishii Feb. 2003 Meles laftiisu qirtay in uu mararka qaarkood ciidamo u diro si uu ula dagaalamo wax uu ugu yeedhay “Ururka Itixaad oo ku xidhan Al-Qaeda.”
Ka dib markii bishii Juun (2006) ay kashifantay in qaar ka mid ah “Qab-qablayaasha Dagaalka (Warlords)” ee Muqdishu ay lacag ka qaadanayeen dawladda Maraykanka si ay u soo qab-qabtaan qaar ka mid ah wadaada Maraykanku raadinayey, waxaa ku kacay shacabkii iyo wadaadii oo israacsan waxaana dagaal xoog leh lagu qaaday ninankii 16ka sano Soomaaliya xoogga ku haystay. Waxa muddo aad u kooban looga nadiifiyey magaaladii Xamar oo 16 sano kala qoqobnayd, waxayna wadaadii qabsadeen Koonfurta Soomaaliya inteedii badnayd; waxayna fureen dekadihii iyo garoonadii diyaaradaha ee Qab-qablayaashu hore u xidheen.” Waxana magaalooyinkii ay qabsadeen ku soo dabaaleen nabad iyo xasilooni. Waxana ay noqotay 16kii sano ee la soo dhaafay markii ugu horaysay ee dadka qaarkood habeen qudha nabad ku seexdaan.
Nabadda iyo xasilooni cusub ee wadaadadu meelaha qaarkood ku soo dabaaleen cid walba kuma farxin, waxayna gaar ahaan wel-wel weyn ku abuurtay dawladdii ku meel gaadhka ahayd ee Baydhabo fadhiday, Somaliland, maamul goboleedka Puntland iyo dawladda Maraykanka; waxayna isku raaceen in meel looga soo wada jeesto oo si kasta oo suurto gal loola dagaalamo.
Haddaba su’aasha meesha ku jirtaa waxa weeye, kooxaha kala duwan ee wadaada ka soo horjeedaa isku dan ama isku mawqif ma yihiin? Jawaabta sida aan u arko kulligood isku dan maaha, waxaase dantoodu isku dhowdahay kooxaha Soomaalida ee Xabashida raacsan kuwaas oo aynu dhihi karno dantoodu waxa ay ku egtahay muddo kooban “short term interest)—ha ahaato dan dhaqaale ama dan xukune, danna kama laha aayaha dadkooda iyo waxa ay ku sugnaan doonaan ama sida Xabashidu ula dhaqmi doonto marka ay dhulkooda qabsato. Xabashidu waxa ay weli aamisan tahay fikradda ah “Itoobiya waa Jasiirad Kiristaan ah oo ku dhex-taalla Bedweyn Islaam ah,” Maraykankana waxa ay u arkaan kii keli ahaa ee maanta Jasiiraddaas badbaadin lahaa sidii wadamadii awoodda lahaa ee reer Yurub hore ugu soo badbaadiyeen Jasiiraddaas.
Bishii Agoos 2002 waxaa booqasho Itoobiya ku tegay laba nin oo guriga odayaasha (U.S. Senate) ka tirsan oo weliba ah kuwa ugu caansan. Labada oday oo kala ah Richard Shelby, oo laga soo doortay gobolka Alabama iyo Arlen Spector oo laga soo doortay gobolka Pennsylvania waxa ay la kulmeen Meles Zenawi. Kulankaas ka dib Meles Zenawi waxa uu labadaas oday u sheegay in “Itoobiya tahay Jasiirad cilmaani (secular) ah oo ku dhex-taalla Bedweyn Islaam ah.” Waxa uu bedelay eraygii Kiristaanka oo ku bedelay Secular.
Sababta uu erayga cusub u doortay waxa weeye in Zenawi arko in aqlibiyadda (majority) dadka Itoobiya ay Muslim yihiin oo aanay markan haboonayn in uu siticmaalo hadalkii awoowayaashii isticmaali jireen. Meles Zenawi dagaalkan maanta uu bilaabay, waxaa suurto gal ah in uu weli aaminsan yahay badbaadinta “jasiiradda masiixiga ah,” waxa kale oo suurto gal ah in uu dagaalka Soomaaliya ka dhiganaayo cimri dheerays siyaasadeed maadaama mucaarad badani waddanka gudihiisa kaga kacsan yihiin.
Waxa aan shaki ku jirin in shucuubaha tirada badan ee diimaha kala duwan kala haysta kuna nool Itoobiya ay ku wada noolaan karaan nabad iyo xasilooni. Waxase ay arrintaasi suurto gal noqon kartaa marka qabiilada aqlibiyadda yari (minorities) xaqiiqsadaan (fahmaan) in aaminsanaanta “Boqortooyada Abasiinaya” oo la soo celiyo ama si kale loo dhaqan geliyo ay tahay khalad; wadamada deriska ahna lagula dhaqmo nabad gelyo iyo deris-wanaag.
Dawladda Maraykanka waxa ay danta guud ugu jirtaa deganaanshaha iyo xasiloonida Geeska Afrika, dagaal sii daba dheeraada oo dhulkaas ka dhacaana waxa uu nacayb iyo nabad-gelyo la’aanba u keeni karaa dawlaadda Maraykanka. Maadaama colaadda Soomaalida iyo Xabashida u dhexaysaa ay tahay mid soo jireen ah, waa talaabo khaldan in dawladda Maraykanku xukuumadda Itoobiya wakiil uga dhigato xaaladda Soomaaliya.
Waa suurto gal in ciidamada Maxaakiimta dagaalka lagu jebiyo, laakiin waxa kale oo aan suurto gal ahayn in dawladda ku meel gaadhka ah ee Baydhabo fadhidaa kursiga –xukunka Soomaaliya xoog loogu fadhiisiyo. Maadaama Cabdullahi Yuusuf iyo xulufaddiisu doorteen in ay dhiig cusub daadiyaan Soomaaliyana nacab ku soo hoggaamiyaan; nabaddii mudada yar shacbigu helayna daaqadda ka tuuraan—rajadii ay madax ku noqon lahaayeen halkaas ayey ku soo af-jarantay. Haddii Maxaakiimta la jebiyona rajadii dawlad Soomaaliyeed oo dib loo dhisaa halkaas ayey ku dhammaatay, waxa keliya oo guushu raacaysaa “warlords-kii) oo halkoodii ka bilaabaya shaqadii keli ahayd ee ay sida fiican u yaqaaneen—tii “isbaarada.” Xabashiduna waxa ay gaadheysaa guusha camalkii ay sida fiican u taqaaney oo ahaa in ay “Soomaalida ku abuurto xasilooni la’aan iyo kala qaybsanaan.”
FIIRO GAAR AH:-Qoraalkan waxaa la qorey bilowgii ama xiligii Xabashido soo gaareen Xeebta Muqdisho.
One thought on “TAARIIKHDA DHULBALAARSIGA XABASHIDA IYO XAALADDA DAGAAL EE SOOMAALIYA KA TAAGAN.”
Pingback: Khilaafkii ka Dhashay Dhulkii Soomaalida ee la kala Qaybsaday | Voice Of Somalia